IMetadata.io: Ngokuzenzekelayo ukuveliswa kombhobho wakho weABM | Martech Zone
IMetadata.io: Ngokuzenzekelayo ukuYilwa kweMibhobho yakho yeABM
NgoLwesithathu, Juni 3, 2020 NgoLwesithathu, Juni 3, 2020 Douglas Karr
Imethadatha liqonga lemfuno elizimeleyo elenza ukuba inkcitho yakho kwintengiso nakwintengiso yedijithali ikuncede ukhawuleze wenze ibango elingaphezulu kunye nombhobho ovela kwiiakhawunti zakho ojolise kuzo.
I-AI yabo yelungelo elilodwa lomenzi kunye neqonga lokufunda ngomatshini lihlalutya idatha yeCRM yembali ukuchonga ukuba ngubani omele abone iintengiso zakho, emva koko kuvavanywa iinjini ezininzi kuvavanyo lwamakhulu okwahluka kwaye kulungiselele oko kuhambisa ezona ziphumo zibalaseleyo ngokufanelekileyo. Iziphumo ngumbhobho womgangatho osuka kwiiakhawunti ekujoliswe kuzo eziveliswe ngokukhawuleza.
IMemo yeMetadata.io yeQonga kunye nesishwankathelo
Ukuchonga nokujolisa -Fumanisa indawo yakho emnandi yentengiso. Yakha abaphulaphuli usebenzisa ukusetyenziswa kwetekhnoloji, injongo yomthengi, ifemographic, ukuthengisa ngokuzenzekelayo, kunye nemithombo yedatha yeCRM. Ukufikelela kwiiprofayili zoqhakamshelwano eziyi-1.2 yezigidigidi.
Hlanganisa kwaye uzame - Linga kwaye ufunde kwisikali. I-AI yeMetadata ivelisa iimvavanyo ezingamakhulu, ke awunyanzelekanga! Khomba olona manyano lusetyenziswayo, abaphulaphuli kunye neziphumo ezibandakanya iiakhawunti zakho.
Fumana kwaye uguqule-Chonga imfuno, ulungiselele kwingeniso, kwaye uphinde. Ukusebenza, ingxelo yokunikezelwa ngokusekwe kumbhobho owenziweyo, ukubandakanyeka kweakhawunti, imibhobho esele ikho nefuthe, kunye nokunye.
Iqonga leMetadata lityebisa ngokuzenzekelayo ikhokelela ngaphambi kokuyidibanisa neNtengiso yakho yokuZenzekelayo okanye iQonga leCRM, kukhokelela kulungelelwaniso olwenziweyo lokuhamba kokuhamba kwedatha ekumgangatho ophezulu.
Ukukhokela kwe-Leadsift kunye neMetadata
Umsebenzi osuka ekhaya ushiye umceli mngeni kubarhwebi beDijithali abathembele kubuchwephesha bemephu yeedilesi ze-IP ezivela kubatyeleli abangaziwayo kwiinkampani zabo, kodwa iidilesi ze-IP zasekhaya azenzi imephu kubuchwephesha bazo. Oku kwenza ukuba kube nzima ukwenza ngokufanelekileyo kwimikhankaso ye-ABM, eyona nto iphambili kubathengisi be-B2B.
LeadSift ibhengeze ubuhlakani bobuchule neMetaData.io ukunceda abathengisi be-B2B baqhube amaphulo edijithali ngaphandle kokuxhomekeka kwi-IP Matching.
Sebenzisa imiqondiso yeenjongo ezivela kwi-LeadSift, abathengi beMetadata ngoku banokujolisa kubathengi kuluhlu lweakhawunti yabo bejolise ekusebenziseni izikhombisi ezinje ngedilesi ye-imeyile, eyona ndlela isebenzayo yokujolisa kwiingcali zeB2B njengoko zisebenza ekhaya rhoqo.
UGil Allouche, u-CEO Imethadatha.io
Ngophawu lwe-LeadSift yoluntu lwewebhu-abathengisi ngoku banokubeka phambili uluhlu lweeakhawunti zabo kunye noqhakamshelwano, kwaye bafikelele kubo ngokuzenzekelayo besebenzisa iqonga lokuvelisa elizimeleyo leMetadata, konke ngaphandle kokuxhomekeka kwidilesi ye-IP.
Bhukisha iDemo yeMetadata.io
tags: abmibhombuCRMfacebook abaphulaphuliifemographiciphepha lokufikaisizukulwana esikhokelayoLinkedInababukeli bokubukelauphawuzendlela.iomomeukuthengisaicandelo labathengisi
I-Facebook itshabalalise ingxoxo ehloniphayo nevulekileyo… kwaye ndenziwe
Uvavanyo lweFlight: Uvavanyo lwe-Beta lwe-iOS kunye nokuBeka esweni ngokuSebenza